What is the definition ofabusiness partner? ﻿
စီးပွါးရေးမိတ်ဖက်ဟူသည့် အဓိပ္ပါယ်မှာ အဘယ်နည်း?
စီးပွါးရေးမိတ်ဖက် တစ်ခုရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ စီးပွါးရေးအရ ပူးပေါင်းမှုပြုလုပ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကြားမှာ ရှိတဲ့ စာချုပ်ပါအချက်အလက်တွေအားလုံးနဲ့ အထူးသီးသန့်ကတိခန်ဝံချက်တွေ အားလုံးပါဝင်ပါတယ်။ အဖွဲ့နှစ်ခုလို့ဆိုရာမှာ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်း တစ်ခုကို ဖန်တီးစီမံခန့်ခွဲဖို့အတွက် လက်တွဲလုပ်ဆောင်ဖို့ သဘောတူညီတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်လည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ အဖွဲ့တွေဟာ နှစ်ဖက်စလုံးအတွက် အကျိုးရှိနိုင်တဲ့ ဘုံရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက် လက်တွဲဆောင် ရွက်ဖို့အတွက် သဘောတူညီကြတဲ့ သီးခြား အဖွဲ့တွေ၊ အုပ်စုတွေ သို့မဟုတ် စီးပွါးရေး လုပ်ငန်းတွေလည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
နည်းဗျူဟာစီးပွါးရေးမိတ်ဖက်တစ်ခု ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ။
နည်းဗျူဟာစီးပွါးရေးမိတ်ဖက်ဆိုတာက ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုရဲ့ ယေဘုယျနည်းဗျူဟာ၊ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်၊လုက်ဆောင်ရန်တာဝန်တွေနဲ့ အနာဂတ်အကြောင်းကို ဆွေးနွေးပြောဆိုတဲ့နေရာမှာ ပါဝင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းဗျူဟာစီးပွါးရေးမိတ်ဖက်ဟာ C-suite သို့မဟုတ် Executive Leadership Team ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့် သူတို့ဟာ HR (ဝန်ထမ်းရေးရာ) ဆွေးနွေးမှုတွေမှာ ဝင်ရောက်ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ နည်းဗျူဟာမြောက် စီးပွါးရေးမိတ်ဖက်ဆိုတာဟာ သူတို့ရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေ ၊အတွေးအခေါ်အကြံဉာဏ် တွေကို တန်ဖိုးထားခြင်းခံရတဲ့ အတိုင်ပင်ခံတွေဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် HR စီးပွါးရေးမိတ်ဖက်တွေကို အကြံပြုချက်တွေပေးနိုင်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်နိုင်ပြီး ၊ ရည်မှန်းချက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်တဲ့ နည်းဗျူဟာစီးပွါးရေး မိတ်ဖက်အဖြစ် သတ်မှတ်လေ့ရှိပါတယ်။
နည်းဗျူဟာစီးပွါးရေးမိတ်ဖက် အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရဖို့နဲ့ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အနာဂါတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုတွေမှာ ဖိတ်ကြားခံရခြင်းနဲ့ ထိုက်တန်ဖို့အတွက် ဝန်ထမ်းရင်းမြစ်ဆိုင်ရာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ယောက်ဟာ ကျွမ်းကျင်မှု(Skill) အချို့ နဲ့ အသိပညာဗဟုသုတ အချို့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပရော်ဖက်ရှင်နယ် တစ်ယောက်ဟာ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရဲ့ ကဏ္ဍအားလုံးနဲ့ ဌာနခွဲတွေအားလုံးအကြောင်းကို နားလည်ထားရမှာ ဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီကဏ္ဍတွေအားလုံးကို HR အနေနဲ့ ဘယ်လိုအကျိုးပြုနိုင် တယ်ဆိုတာကိုလည်း နားလည်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ပြဿနာအခက် အခဲတွေ၊အကြံဉာဏ်တွေကို နားထောင်တဲ့ နေရာမှာနဲ့ အထူးသဖြင့် အခက်အခဲတွေကို ဖြေရှင်းဖို့နည်းလမ်းတွေ ရှာဖွေဖော်ထုတ်တဲ့ နေရာတွေမှာ ကျွမ်းကျင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
HR စီးပွါးရေးမိတ်ဖက် နှင့် HR မန်နေဂျာ
HR စီးပွါးရေးမိတ်ဖက် နှင် HR မန်နေဂျာတွေဟာ သီးခြားကဏ္ဍတွေဖြစ်ပြီးတော့ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုအတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းရေးရာဝန်ဆောင်မှုတွေကို ဖော်ဆောင်လုပ်ကိုင်တဲ့ ပုံစံကွဲနှစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ HR မန်နေဂျာတာဝန်ဟာ မူပါဒဖန်တီးရေးနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပြဌာန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရာထူးဟာ ဝန်ထမ်းလစာ ပေးချေမှု၊ ဝန်ထမ်းသစ်ရှာဖွေခြင်း၊ ဝန်ထမ်းခန့်အပ်ခြင်း၊ စနစ်စီမံခန့်ခွဲရေး နှင့် အခြား သောကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တာဝန်ယူရပါတယ်။ HR မန်နေဂျာဟာ HR ဌာနကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲပါတယ်။
HRစီးပွါးရေးမိတ်ဖက် အနေနဲ့ကတော့ ဌာနတစ်ခုကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲဖို့တာဝန်မရှိပါ။ သူတို့ရဲ့ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ ကုမ္ပဏီနည်းဗျူဟာတစ်ခုလုံးကို လမ်းညွှန် ပေးဖို့နဲ့ ဆက်သွယ်ပေးဖို့အတွက် ကုမ္ပဏီရဲ့ အကြီးတန်းခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့ နှင့် ဌာနဆိုင်ရာ မန်နေဂျာတွေနဲ့အတူ တွဲဖက်လုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ HR စီးပွါးရေး မိတ်ဖက်ဟာ HR ဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့ ပဏာမလုပ်ဆောင် ချက်တွေ (သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းအရည်အသွေးတွေ) နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Executive Team တိုင်ပင်အကြံပေးတဲ့ အခါမှာ HR ဌာနနဲ့ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံး အပေါ်မှာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်တဲ့ HR ပဏာမလုပ်ဆောင်ချက် (သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းအရည်အသွေး) နှင့် နည်းဗျူဟာတွေ ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာလည်း ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။